ပျိုမေတို့သိဖို့ တာလီဘန်အကြောင်း marriage | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပျိုမေတို့သိဖို့ တာလီဘန်အကြောင်း marriage
ပျိုမေတို့သိဖို့ တာလီဘန်အကြောင်း marriage
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 14, 2012 in Copy/Paste | 41 comments
ဝါရှင်တန်တိုမ်းစ်မှာ ၂၀၀၄ခုနှစ်က ဗာတီကန်ခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်ကနေ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေငြာချက်မှာ ကက်သလစ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ မွတ်စ်များနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြဖို့ သတိပေးလိုက်ပြီး မွတ်စ်များကိုလည်း လူ့အခွင့်အရေး၊ လိင်ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှု၊ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မွတ်စ်များရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဥပဒေအတိုင်း လက်မထပ်ခဲ့သူ အနောက်တိုင်း ကက်သလစ်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးအချို့ဟာ လင်သားဖြစ်သူ နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့အခါ မိသားစုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အနည်းဆုံး ကြုံတွေ့ရပြီး ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ဖြစ်ရပ်များနဲ့ ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။
အဓိက ပြသနာက ကက်သလစ်များအဖို့ မွေးလာတဲ့ခလေးကို ရေနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ ခရစ်ယာန်ထုံးတမ်းစဉ်လာ ပြုဖို့လိုအပ်ပေမဲ့ မွတ်စလင်သံရုံး ကောင်ဆယ်လာရုံးမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါ အစ္စလာမ်ဥပဒေအရ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တယောက်ကို အခြားဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခွင့် တားမြစ်ထားခြင်းပါ။ (အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာဆို သေဒဏ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စကားချပ်) ဒါကြောင့် လက်ထပ်တဲ့အခါ ရှာဟာဒါလို့ခေါ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး ကြမ်းကျိန်မှုကို ရှောင်ကြဉ်ကြဖို့ သတိပေးထာပါ။ အဲဒီကြမ်းကျိန်မှုသည် အစ္စလာမ်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းမှုအဖြစ် တရားဝင်သက်ရောက်စေပြီး နောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေခဲ့ရင် ပစ္စည်းဥစ္စာအမွေပိုင်ဆိုင်မှု၊ သားသမီး ထိန်းကြောင်းပိုင်ခွင့် စတာတွေ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ (ကြုံလို့ ပြောရရင် မြန်မာပြည်မှာလည်း အဲသလိုမျိုးတွေ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်က ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ သူတို့ဥပဒေအတိုင်း လက်မထပ်ခဲ့သူ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ သို့မဟုတ် လက်ထပ်ရကောင်းမှန်း မသိသူ မြန်မာမတွေ၊ တချို့လည်း အစ္စလာမ်ဥပဒေရဲ့ တဖက်သက် နိုင်လိုမင်းထက် ဆုံးဖြတ်ချက်သက်ရောကပုံ နားမလည်ဘဲ လက်မှတ်ထိုးလိုက်သူ မြန်မာမတွေ မွတ်စလင် လင်ယောက်ျား သေတဲ့အခါ၊ အိမ်ထောင်ကွဲတဲ့အခါ လက်လွတ် အိမ်ပေါ်ကဆင်းရတယ်၊ ဒါမှ မဟုတ်လဲ တသက်လုံး မွတ်စလင်မအဖြစ် ခေါင်းမြီးခြုံ အိမ်တွင်းအောင်း ရတော့တယ်။
အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် ကိုလိုနီခေတ် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ ဂဠုန်ဦးစောက မြန်မာ့အိမ်ထောင်ရေး ဥပဒေပြဌာန်းပြီး ဘာသာခြားနဲ့လက်ထပ်သူ မြန်မာမများကို အကာအကွယ် ပေးခဲ့ရတယ် ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒါကတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာဆိုတော့ ကိုယ်လူမျိုးယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ဥပဒေ အသက်ဝင် လွှမ်းမိုးတာပေါ့နော်၊ အထက်မှာ ဗာတီကန်ကျောင်းတော်က သတိပေးရတာ ကိုယ့်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေ မွတ်စ်သံရုံး၊ ကောင်ဆယ်လာရုံး တခုခုမှာ အစ္စလာမ်ဥပဒေနဲ့ ကြမ်းကျိန်လက်ထပ်ခဲ့ရင် ဒုက္ခရောက်ကြလို့ပါ။ နောက်တခါ ဆွန်နီအစ္စလာမ် ထုံးတမ်းအရထင်တယ် (ရှီးယားအစ္စလာမ်မှာ မပေးဘူး သို့မဟုတ် ကျနော် ဟိုဖက်ဒီဖက် လွဲတာဖြစ်နိုင်တယ်) ကာလတို လက်ထပ်ခွင့်ရှိတယ်၊ ရေခြေခြားအရပ်ဒေသမှာ ခရီးသွားမွတ်စ်တွေ တစိမ်းမိန်းမနဲ့နေလို့ ဘာသာရေးအရ အပြစ်မဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာပါ။ မွတ်စ်ဘုန်းကြီးပင့်ပြီး ဘာသာရေး ထုံးစံလုပ်လိုက်ရင် လင်မယားမြောက်တယ်၊ အလွယ်တကူပဲ ခွဲနိုင်တယ်၊ အတည်လက်ထပ်ခြင်းလို နှောင်ကြိုးကြီးကြီးမားမား မရှိဘူး။ အရေးကြီးတာ ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေး မရပါ။ အနောက်ပုံစံ လစ်ဗင်းတူဂဲသားနဲ့ တူပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လက်ထပ်တိုင်း အတူတူပဲဆိုပြီး အညာခံရသူတွေ တပုံတပင်။) အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာ အင်္ဂဂုလိလို သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Read more: Vatican warns women about Muslim mates – Washington Times http://www.washingtontimes.com/news/2004/may/15/20040515-121620-3934r/#ixzz29GwVXo7D
VATICAN CITY — The Vatican warned Catholic women yesterday to think seriously before marryingaMuslim and urged Muslims to show more respect for human rights, sex equality and democracy.
Calling women “the least-protected member of the Muslim family,” it spoke of the “bitter experience” some Western Catholics have had with Muslim husbands, especially if they married outside the Islamic world and later moved to his country of origin.
The comments inadocument about migrants around the world were preceded by remarks about points of agreement between Christians and Muslims.
The document said the Vatican hoped Muslims would show “a growing awareness that fundamental liberties, the inviolable rights of the person, the equal dignity of man and woman, the democratic principle of government and the healthy lay character of the state are principles that cannot be surrendered.”
WhenaCatholic woman and Muslim man want to marry, it said, “bitter experience teaches us thataparticularly careful and in-depth preparation is called for.”
It said one potential problem was with Muslim in-laws and advised future mothers that they must insist on church policy that children born ofamixed marriage be baptized and brought up as Catholics.
Pope John Paul II has broken ground in dialogue with Muslims and even prayed inamosque in Damascus, Syria. He won praise in the Muslim world for strongly opposing the Iraq war.
This issue arose last month when Muslims in Spain asked to be able to pray in the Cordoba cathedral, which was onceamosque. A senior Vatican official said this would be “problematic.”
Read more: Vatican warns women about Muslim mates – Washington Times http://www.washingtontimes.com/news/2004/may/15/20040515-121620-3934r/#ixzz29GwNbXvY
အဲဒီလုံးဝ လက်သင့်ခံစရာ တစ်စက်မှ မရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေ နဲ့ ပတ်သက်မှုတွေဟာ ရှေးတုန်းကတဲက အစဉ်အလာမပျက်ခဲ့တာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ခရစ်ယန်တွေ ဟိန္ဒူတွေ သိခဲ့ကြပြီးသားပါ
ဒီမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယောက်ျားက ခရစ်ယန် မိန်းမ ကို ယူတယ် ၊ ဘာရှော့မှ မရှိ
ခရစ်ယန် ယောက်ျားက ဗုဒ္ဓဘာသာ မိန်းမ ကို ယူတယ် ၊ ဘာရှော့မှ မရှိ
ထို့ အတူ ဟိန္ဒူ နဲ့ ခရစ်ယန် နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေလဲ ဘယ်လိုလက်ထပ်ပေါင်းသင်းသင်း ဘာရှော့မှ မရှိ
ဒီလောက်ပဲ မန့် တော့မယ်ဗျာ
အဟဲ ဦးကြောင်ကြီးတောင် တင်သေးတာ အနော့်မကျေနပ်ချက်တွေကိုလည်းတစ်ခုချင်းတင်ချင်တယ်။
ဒီမိုသဂျီး မဖျက်နဲ့ ကော်မန့်မပိတ်နဲ့ဗျာ။ခင်ဗျားက ဘရိန်းစတောင်းချင်သကိုး။ဘရိန်းစတောင်းစေရပါမယ်။
ကျုပ်ကအခုလို critical အချိန်မို့ပြန်ဖျက်ရတာတွေ၊ပြန်သုံးသပ်ရတာတွေ ခဏခဏပဲနော်။မတင်သေးဘူး။
မှပေးစရာလဲမလိုပါဘူး။သောက်ညင်ကပ်ရင် အနှုတ်ပါပေးချင်ပေးလိုက်။ထုတ်ပစ်ရင်တောင် ဟိုကောင်တွေထက်မညံ့ပါဘူး နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့တင်ပေးဦးမှာပါ ထားပါခင်ညားကြီးမှတ်ထားပါ။ကျုပ်က
မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ပဲ ပြန်ဗျင်းမယ်။ဘယ်ကောင်တွေက ဒီမိုကျလဲ
ဆက်ကြည့်တာပေါ့။ခင်ညားသဂျီးဒီမိုနော်ကျုပ်တင်တဲ့ စာတွေကျမှ ဒီမိုမကျရင်တော့
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိပေးပါ။ကြိုတင်မေးထားရတာ စိတ်မရှိပါနဲ့ ဒီမို/လစ်ဘရယ်သဂျီးရေ………..
မွတ်စ်များနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတာ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြဖို့ သတိပေးလိုက်ပြီး
တကယ်တော့ ဘာသာကွဲရင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့မသင့်ပါဘူး
ကိုယ့်မှတ်ပုံတင်မှာပါတဲ့ ဘာသာကို တကယ်ယုံကြည်တာ မယုံကြည်တာကတပိုင်း
အဲဒိဘာသာဝင်ဖြစ်မှု့တွေက နောက်ပိုင်း အကျိုးဆက်တွေ ပေးလာနိုင်တာကတပိုင်းပါ။
ဒါကြောင့် ဘာသာတူခြင်းပဲ ယူတာကသာ နောက်ကြောင်းအေးပါတယ်။
အူးကြောင်ကတော့ ကြောင်လီဘန်ပေါ့။ :D
ဦးကြောင်ရဲ့ ဒီ Post က အကျိုးရှိပါတယ် ။
” ဗာတီကန်ခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေငြာချက်မှာ
မွတ်စ်များကိုလည်း လူ့အခွင့်အရေး ၊ လိင်ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှု ၊
ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ”
ဟုတ်ပါ့ ၊ အဘ တို့ မှာလည်း ၊
မွတ်စ် တွေအပေါ်ကို လူသား အချင်းချင်းပါပဲ ဆိုပြီး ၊
သူတို့ မွတ်စ် တွေ ဘက်ကလည်း ၊
လူ့အခွင့်အရေး ၊ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး တွေကို ၊
လေးစား လိုက်နာမှုမှာ အရမ်း အားနည်းတာ ၊
even ပက်ပက် စက်စက် ချိုးဖေါက်တာကို ၊
သူတို့ရဲ့ ဥပဒေတွေမှာကိုက ထင်ထင် ရှားရှား တွေ့နေရတယ် ။
တရားမျှတမှုကို အမှန် လိုလားသူ တစ်ယောက်အနေနှင့် ၊
သူတို့ဘက်ကို စာနာ ပေးဖို့ ရေရှည် မဖြစ်နိုင်တာ တွေ့ရတယ် ။
သူတို့ဘက်က စ ပြင်ရမယ် ။
မဟုတ်ရင် သေချာပေါက် ကမ္ဘာမှာ စစ်မီးကြီး တောက်လောင်လိမ့်မယ် ။
အီရန် ယောက်ျား ကိုယူမိတဲ့ အဖြူမရဲ့ တကယ့် အဖြစ်အပျက် ” Not Without My Daughter ” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ကိုပဲ အမှတ်ရနေမိတယ်…….
တကယ်တော့ ကုလားအုပ် ပုံပြင်ကို နမူနာယူပြီး ခေါင်းပေး မဝင်သင့်တဲ့ သူတွေပါ။
ဒဲဒီ ရုပ်ရှင် က တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုရိုက်ထားဒါလေ… အရမ်းကောင်တဲ့ Movie ပါ…
ဘာသာခြားကိုမပြောနဲ့ သူတို့ ကုလားအချင်းချင်းမှာတောင် မိန်းမတွေအတွက်ဘာအခွင်အရေးမှမရှိဘူး
Islam ဘာသာရဲ့ Truth Facts တွေကို ဒီ Link ထဲ့မှာ Ex-Muslim အမျိုးသမီးကရှင်းပြထားတယ်..
ကျွန်တော်လည်းငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာ မွတ်တစ်ချို့နဲ့
မူရင်းကူရမ်က လူ့ကျင့်ဝတ်ကိုဖေါက်ဖျက်တာတွေ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်ကြောင်း ပညာတတ်မွတ်ဆလင်များက ကြားဝင်ဖြေရှင်းတတ်ကြပါတယ်။ ခက်တာက အမှောင်တကာ့အမှောင်ထဲအမိုက်ဆုံး အမှောင်ဖြစ်တဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသားမွေးမှုတွေထဲ ကျဆင်းကြရတဲ့ မိန်းကလေးများက အချိန်လွန်ခါမှ မရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်ကြ၊ လူသိထင်ရျားဖြစ်လာကြရတော့ ပါတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ကြသူတွေထဲ မသင့်တော်စရာဖြစ်လာကြရပါတယ်။ မိန်းကလေးများကို နိုင်ထက်စီးနင်းလုပ်ရာမှာ ပြိုင်စံရှားခဲ့တဲ့ စနစ်ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း နဲ့ မွတ်စလင်နိုင်ငံများမှာတောင် ဒါတွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလာကြပါပြီ။
ဒီလိုကိစ္စတွေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသိသာလာအောင်၊ ရေးသူများက ထပ်ပြန်တလဲလဲသတိပေးရေးနိုင်ကြဘို့လိုပါတယ်။
သူများတိုင်းပြည်ထဲ အရိပ်နေနေအခက်ချိုးချိုးလုပ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးအော်နေတဲ့မွတ်စ်တွေ ကိုယ့်အချင်းချင်းမှာပဲအရင် အခွင့်အရေးကိုသာတူညီမျှရှိအောင် အရင်လုပ်လိုက်ပါအုံးလို့ပဲ မန့်ချင်တော့တယ်……..အင်းဆဲမိတော့မယ် ……. မနည်းစိတ်ထိန်းထားရတယ်နော်
စိတ်နာလွန်းလွန်းပါ ဒင်းတို့တွေကို ပြောရင်းဆဲမိတော့မယ်…….
ဒါပေမဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ဘာသာတိုင်းမှာ လက်တုန်ကပြန်မှု့ဆိုတာနည်းပါးကြတယ်..
အူးကြောင် အဲလောက်ရှင်းပြတာတောင် အချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးဆိုပြီး ယောက်ျားရှား နေတဲ့မိန်းမတွေတစ်ပုံကြီး
ကုလားရဲ့ ယာယီပံ့ပိုးမှုကိုသာယာပြီး ဒုတ်မဲကို လယ်ကွက်ပုံအပ် ပြီးတော့ လယ်ထဲက နေ ကုလားသီးတွေပဲသီးလာ ကုလားပွင့်တွေပဲပွင့်လာ ဟူး…မွေးတဲ့ မိဘတွေကလဲ သြကာသ ဘုရားရှိခိုးတစ်ခုထဲသင်ပေးရုံနဲ့ ကိုယ့်သားသမီး ကိုbuddhist ဘာသာဖြစ်အောင်လုပ်လိုကမရဘူး
အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်၇ှားစေချင်ပါတယ်..။ ဘာသာကွဲနဲ ယူရင် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ပြသနာတော့ တက်မှာပဲ လေ..။ ဒီတော့ ဆင်ခြင်ကြပါ…။
ဆဲမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အမျိုးကပဲ စဆဲချင်ပါတယ်…………..
မိန်းကလေးတွေကို ဘာသာခြားတွေနဲ့ မပတ်သက်စေချင်ရင် ယောကျာင်္းလေးတွေကလည်း ဘာလုပ်နေကြလည်း…………
လစ်ဘရယ်ဆန်တယ်ပြောပီး သစ္စာမရှိ ရည်းစားထည်လဲတွဲတဲ့ ခေတ်ထဲမှာ
မိန်းကလေးက ဒီတွင်းထဲကျသွားတာ အပြစ်လား………..
ကိုဒီမိုတို့ ရေ စကားနဲ့ လက်တွေ့ ရှင်းလင်းဖို့ လိုပါတယ်…..
မိန်းကလေးတွေ ဒီလိုဖြစ်တာ သူတို့ အပြစ်ကြီးမဟုတ်ပါဖူး…….
တာဝန်မယူရဲတဲ့ တထစ်ရှိလစ်ဘရယ်ဆန်တယ်လို့ ပဲပြောပီး မိန်းကလေးတွေရဲ့ ငြိုးနွမ်းသွားမယ့် သိက္ခာကို ထည့်မတွက်တက်တဲ့ ယောကျာင်္းလေးတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိကြောင်း ပြောပါရစေ……
ဒါပေမယ့် အများစုကို မြင်တာကတော့ အဲ့လိုပါပဲ……………..
ကျွန်မတို့ အဖေက ကျွန်မတို့ ကိုငယ်ငယ်ကတည်းကခေါင်းထဲသွင်းပေးထားတာရှိတယ်။
ကုလားရယ်၊ သူများယောက်ျားရယ်ကလွဲရင် ကိုယ်ကြိုက်လို့ ရှိရင် သူတောင်းစားပဲယူယူတဲ့။ ကိုယ်ရွေးတဲ့လမ်း ကောင်းရင်စံ၊ မကောင်းရင်ခံ တဲ့။
တားတို့ အတွက် လပြိုလေးများသိဖို့တာလီဘန်အကြောင်းဆိုပြီး နောက်တစ်ပုဒ် ရေးပေးဦးနော်..
ဒါမှရှောင်သင့်တာရှောင် ပေါင်သင့်တာပေါင် အဲလေ..ဆောင်သင့်တာဆောင်လို့ ရမှာကော
လောလောဆယ် ဒေါ်လချမီးဆီမှာ ဘီအီးဖိုး ချီးရင်းချီးရင်းနဲ့အတော်များပြီး ပြန်မဆပ်နိုင်ရင် ဒေါ်လချမီးက လူသိမ်းမယ်လုပ်နေတယ်..
ကျနော့်ကိုယ်စား အူးကြောင် အသိမ်းခံပေးပါလားဟင်
မွတ်ဆလင်အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်းလေး.. နက်နက်နဲနဲပြသွားတဲ့.. မနှစ်က အကယ်ဒမီရတဲ့..အောက်ကအီရန်ကားလေးကြည့်ကြစေချင်တယ်…
123 min – Drama – 16 March 2011 (Iran)
Ratings: 8.5/10 from 65,404 users Metascore: 95/100
Reviews: 181 user | 303 critic | 41 from Metacritic.com
A Separation (Persian: جدایی نادر از سیمین‎ Jodái-e Náder az Simin, “The Separation of Nader from Simin”) isa2011 Iranian drama film written and directed by Asghar Farhadi, starring Leila Hatami, Peyman Moaadi, Shahab Hosseini, Sareh Bayat, and Sarina Farhadi. It focuses on an Iranian middle-class couple who separate, and the conflicts that arise when the husband hiresalower-class carer for his elderly father, who suffers from Alzheimer’s disease.
ဒီဘက်မှာရှိလား မသိဘူး ရှာကြည့်လိုက်အုန်းမယ် သူကြီးရေ
မွန်မွန်ဆယ်တန်းအောင်လို့ တက္ကသိုလ်တက်မယ်ဆိုတော့ မူလတန်းတုန်းက ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတစ်ယောက်က ဆုံးမဖူးပါတယ်။ ဆရာမကြီး သမီးကို အချက်သုံးချက်ပဲ မှာချင်ပါတယ်တဲ့။ အဲဒါကိုပဲ တစ်သက်လုံးလိုက်နာပေးပါတဲ့။
၁။ မိမိရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကို ထိန်းသိမ်းရမယ်။
၃။ ကုလားကို မယူနဲ့။
အဲ.. နယူးစ်ဝိခ်မှာ.. ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ.. ပါလာတဲ့..အောက်ကဆောင်းပါးလေးလည်း.. အရမ်းကောင်းပါတယ်..
မွတ်ဆလင်အမျိုးသမီးအဖြစ်ပြောင်းဖို့ အခြေအနေဖြစ်သူများလည်း.. ဖတ်သင့်ပါတယ်..။ :harr:
နိုးးးးးးးးးးးးးး ဘာ အူးကြောင် ……. အိမ်ကလည်း စကားကုန် ပြောထားပါရဲ့ …….
ကြိုက်တဲ့ ဘာသာဝင်၊ ကြိုက်တဲ့ လူတန်းစားကို ကြိုက်သလို ယူနိုင်တယ် ။ ဒုက္ခိတကိုပဲ ကြိုက်ကြိုက် ၊သူတောင်းစားပဲ ကြိုက်ကြိုက် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကြိုက်သလိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ် ဒါပေသိ …… မွတ်စလင်ယူလာလျှင်တော့ …. အမျိုးဖြတ်မယ် ၊ စွန့်ပစ်မယ်ဆိုပဲ ……
လူညိုးဇွဲ ဒေါ့ဟုတ်ဘူး … အိမ်က ကြောတာ .. ပြန်ကြောဗျတာ .. ဒါဗြဲ :harr:
ဘဖောရယ် ခုတောင် အီရန်နဲ. အစ္စရေးတည်နေတာက ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ဖို.တည်နေတာပဲမလား
စစ်ဆိုတာ လူတစ်စု အတွက်ကောင်းတယ် ဆိုပေမယ့် နောက်ဆုံးရလဒ်က အားလုံးပျက်စီးခြင်း
ကို captainamerica ရေ ။
စစ်ပွဲ မှန်သမျှ မကောင်းဘူးလို့တော့ ပြောလို့ မရဘူးဗျ ။
အဘ အမြင်တော့ ဦးတည်ချက် ( Cause ) က အရေးကြီးတာဗျ ။
တချို့ အခြေအနေတွေမှာ စစ်ပွဲ ဟာ လိုကိုလိုအပ်တယ်ဗျ ။
စစ် ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေလည်း ရှိသေးတယ်ဗျ ။
ဥပမာ ပြောရရင် ၊
နာမည်ကြီး တရုတ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုမှာ ၊
သူ့လူမျိုးတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ စစ်ဘုရင် တစ်ပါးကို လက်စားချေလိုပေမယ့် ၊
အဲဒီ ပြတ်ပြတ်သားသား အင်အားကြီးမားတဲ့ စစ်ဘုရင် က ၊
ပြည်နယ် အားလုံးကို အပြီးတိုင် တိုက်ခိုက် သိမ်းသွင်း နိုင်လိုက်တဲ့အတွက် ၊
တရုတ် တစ်ပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းသွားတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် ၊
လက်စားမချေဖြစ်တော့တဲ့ အကြောင်းပြထားတယ်ဗျ ။
နို့မို့ရင် အဲဒီပြည်နယ် ဘုရင်ငယ်တွေက ၊
ပွင့်လင်း ရာသီတိုင်း မာနပြိုင်ပြီး တခြိမ်းခြိမ်း တိုက်နေကြတာလေ ။
အခုကြတော့ ဘုရင်အကြီး တစ်ယောက်ပဲရှိတော့တဲ့အခါကြတော့ ၊
တည်ငြိမ် ငြိမ်းချမ်းသွားတော့တာပေါ့ဗျာ ။
ဦးတည်ချက် ( Cause ) က အရေးကြီးတာဗျ ။
ဥပမာ အမေရိကန်တွေ အဏုမြူဗုံး မကြဲခင်မှာ ၊
ရလာမယ့် အကျိုး အပြစ်ကို စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်ဗျ ။
ဂျပန်ကျွန်းမကြီးကိုသာ အမေရိကန်တပ်တွေ နှင့် ဝင်တိုက်ရရင် ၊
အမေရိကန်တွေ အနည်းဆုံး တစ်သိန်းကျော် ထပ်သေဦးမှာ ဖြစ်သလို ၊
ဂျပန်တွေလည်း အနည်းဆုံး တစ်သန်းကျော် ထပ်သေဦးမှာ ဖြစ်တယ် ။
ဂျပန် ဘက်ကလည်း လက်နက်ချမယ့်ပုံ လုံးဝ မပြဖူးဗျ ။
ဂျပန်တွေရဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘုရင် နှင့် ရေမြေကို ၊
အသက်ကို လုံးဝ ဂရုမထားပဲ အသေခံပြီး ကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပုံကို ၊
အိုကီနာဝါ နှင့် ဆိုင်ပန် ကျွန်းသိမ်း တိုက်ပွဲတွေမှာ တွေ့ခဲ့ရပြီးပြီလေ ။
အဲဒီလို အခြေအနေမှာ အဏုမြူဗုံး ချတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မမှားဘူးဗျ ။
အခြေအနေ အရ လုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စကို လုပ်သွားတဲ့ သဘောပဲရှိတယ် ။
( ဒါကြောင့်လည်း ဂျပန်တွေက အမေရိကန်တွေကို မမုန်းတာဗျ )
ဦးတည်ချက် ( Cause ) ကသာ အရေးကြီးတာပါဗျာ ။
အမှတ်မမှားရင်.. အဲဒီရုပ်ရှင်က.. Hero ရုပ်ရှင် ပဲ..
Hero isa2002 wuxia film directed by Zhang Yimou. Starring Jet Li as the nameless protagonist, the film is based on the story of Jing Ke’s assassination attempt on the King of Qin in 227 BC.
တတိယကမ္ဘာစစ်က.. အီရန်ကစနိုင်တယ်လို့.. ခန့်မှန်းထားတာတွေရှိတယ်..။
အမေရိကားက.. ဒါကိုရှောင်လွှဲလို့ရရင်.. ရှောင်လိုဟန်ရှိပါတယ်.
နောက်တနည်းကတော့.. ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီး၃ခုနဲ့ထိပ်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့.. အစ္စလမ်ဘာသာကို.. နောက်ကျန်တဲ့တခုနဲ့ပါလှည့်တိုက်ပေးလိုက်ဖို့ပဲ..
တဦးချင်းစီက.. အသိ..သတိနဲ့.. သတိထားကြစေလိုကြောင်း..
စစ်ကို ငါတို့ မုန်းပါသည် ။
အိမ်ကတော့ ဘာမှမပြောဘူး…ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အညီ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကန့်သတ်
ထားတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား..ဆင်ခြင်တယ်….ဒါပေသိ အသာမည်းတာတော့ ဘယ်လို
မည်းတာမှ အပေါ်ကလက်ဖမိုးကမဲမဲကို လက်ဖ၀ါးစောင်းအနားသတ်တစ်ဝက်ထိ ဆက်မဲမဲ ကျန်တဲ့အောက်ဘက်လက်ဖ၀ါးတစ်ပိုင်းက ဆနွင်းရောင်လိုလို၊ဖြူဆွတ်ဆွတ်လို နှစ်ပိုင်းခွဲ
…မေမေ့ကို သမီးကို ကပ္ပလီအသားမည်းက date လုပ်ချင်တယ်ပြောလို့ သူ့dateလက်မခံ
ချင်လို့ dateလုပ်ချင်ရင် မိဘခွင့်ပြုချက်ရှိမှရတာဆိုပြီး မိဘလွှဲချကာမှ သူကအိမ်လိုက်ပြော
မယ်ပြောနေလို့ ထူပူပြီး ငါ့မိဘကအဲ့လိုလိုက်ပြောရင်ငါ့ကိုဆူမှာဆိုပြီး ပြောလိုက်ရတယ်လို့ ပြန်ပြောပြတော့ မေမေက စိတ်မပူတဲ့အပြင် သူ့သမီးအကြောင်းသိနေတော့ ရယ်လိုက်တာ
” ငါ့သမီး အသားမည်းတာကြောက်တဲ့လူမှ Negro နဲ့တန်းတိုးတာကိုး” တဲ့…နောက်လည်း
လာတောင်းပန်လည်း ပြန်မပြောတော့ဘူး…..နောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ်ပုတ်တော့ သူတောင်း
ပန်တာလည်း ဘာမှပြန်မပြောတော့ သူလည်းမျက်နှာပုတ်ရောပါ့…ဟီး…ကိုယ်လွန်သွားမှန်း
သိပေမယ့် ဇာတ်လမ်းအပြီးဖြတ်ချင်တာနဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရတာ….အဲဒီကတည်းက သင်ခန်း
စာကောင်းကောင်းကို ရသွားတာ…”စေတနာသည် အသားမည်းနဲ့မထိုက်တန်”..ဟိ
ပိူ့စ်နဲ့.. ဘာမှတော့ မဆိုင်ဘူး..။ ဟုတ်မဟုတ်လည်း.. မသေချာ…
အလိမ္မာအိမ်အပါခေါ်လာတဲ့.. သံအမတ်ကတော်နှင့် သူ၏ဘာသာရေးအကြောင်း..
အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးနှင့် ဇနီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းမည်
by Uba Khet on Monday, October 8, 2012 at 8:02am ·
အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲလ်ရစ်မစ်ချယ်နှင့် ဇနီးတို့သည် လာမည့် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သံရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမှ ယနေ့ပြောကြားလိုက်သည်.
သူမိန်းမ နာမည်က ဝီကီ ထဲမှာ Lee Hun-min
Mitchell has been married to Lee Hun-min (a.k.a. Min Lee)aTV journalist from Taiwan since April 30, 2006.
မြန်မာ..ထေရ၀ါဒလို့.. ယူဆစရာဖြစ်သွားရင်.. ဆောရီး..
…မေမေ့ကို သမီးကို ကပ္ပလီအသားမည်းက date လုပ်ချင်တယ်ပြောလို့…………………….. ပြန်ပြောပြတော့ မေမေက စိတ်မပူတဲ့အပြင် သူ့သမီးအကြောင်းသိနေတော့ ရယ်လိုက်တာ
ကို……..” ငါ့သမီး အသားမည်းတာကြောက်တဲ့လူမှ Negro နဲ့တန်းတိုးတာကိုး”…………
U Kyaung: သမီးလေး နှင်းနှင်း… ဦးကြောင် စေတနှာနဲ့ ပြောမယ်၊ အနားကပ်တိုး နားထောင်နော်၊ နေရာမရှိရင် ဦးကြောင်ပေါင်ပေါ်လာထိုင် :cool: … ဒီလိုကွဲ့၊ လူမဲတွေကို ရည်ညွှန်းတဲ့အခါ နီဂရိုးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အလွန်ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အဆင့်အတန်းခွဲမှု သတ်မှတ်တယ်။ သုံးမိရင် ဥပဒေရအရော လူမှုဆက်ဆံရေးမှာပါ ပြင်းထန်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရင်ဆိုင်ရမယ်၊ ကိုယ့်ဖက် ဖေးမကယ်နိုင်မည့်သူ မရှိဘူး။ ခေါ်ချင်ရင် လူမဲ၊ အမဲ၊ ဘလက်လို့ ခေါ်တတ်ဖို့ အကျင့်လုပ်ပါ။ လူရှေ့သူရှေ့ ကြောင်သူတော် အခေါ်အရတော့ အာဖရိကန်လူမျိုး ဖြစ်တယ်။ အရင်လို မြန်မာပြည် တံခါးပိတ်ထားရ ပြသနာမရှိပေမဲ့ အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံနေပြီဆို အသုံးအနှုန်းမမှားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အမဲလူဦးရေက အမေရိကန်မှာ ဒုတိယအများဆုံး၊ သူတို့ကို ထိတာ လူဖြူတွေကို ထိသလိုပဲ တုံ့ပြန်မှု သိပ်ကြီးတယ်။ နဂိုထဲက အခံရှိထားလို့ ပိုနာတတ်တယ်။ နောက်ထပ် လုံးဝ မသုံးနှုန်းမိပါစေနဲ့။ ဟိုးတချိန်က အာရှတိုက်သားတွေကိုလည်း အဝါတွေလို့ နှိပ်ခေါ်တယ်၊ အသားအရောင် ခွဲခြားမှုစနစ်ရှိတဲ့ ၁၉၆၀နှစ်ပိုင်းလောက်တွေ အထိပေါ့။ အမဲနဲ့ကာလာတွေဆိုရင် အဖြူတွေနဲ့အတူတူ သွားလာစားသောက်ခွင့် မရှိဘူး။ ဒါတွေကို ဦးဆောင်တိုက်ဖျက်ပေးခဲ့တာ အမဲတွေ၊ သူတို့ ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ မြင်ရင်ရတယ်။
Foreign Resident says: ဦးတည်ချက် ( Course ) က အရေးကြီးတာဗျ ။
ဥပမာ အမေရိကန်တွေ အဏုမြူဗုံး မကြဲခင်မှာ ၊ ရလာမယ့် အကျိုး အပြစ်ကို စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်ဗျ ။ ဂျပန်ကျွန်းမကြီးကိုသာ အမေရိကန်တပ်တွေ နှင့် ဝင်တိုက်ရရင် ၊
အမေရိကန်တွေ အနည်းဆုံး တစ်သိန်းကျော် ထပ်သေဦးမှာ ဖြစ်သလို ၊ဂျပန်တွေလည်း အနည်းဆုံး တစ်သန်းကျော် ထပ်သေဦးမှာ ဖြစ်တယ် ။ ဂျပန် ဘက်ကလည်း လက်နက်ချမယ့်ပုံ လုံးဝ မပြဖူးဗျ ။ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ အဏုမြူဗုံး ချတဲ့……………..
U Kyaung: ဂျပန်တွေရဲ့ ခုခံစစ်ပွဲ ပြင်းထန်ပုံ အကြောင်းပြချက် ရှိပေမဲ့ လူဆိုတာ အတ္တမျိုးမို့ လူဖြူအချင်းချင်း ဂျာမနီကို ညှာခဲ့တယ်လို့ ပြောတာတွေရှိတယ်။ ဂျပန်ကို မုန်းလို့အဏုမြူဗုံး ကြဲတယ် မထင်ဘူး၊ လုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါ ကော့ကေးရှန်းဂျာမနီကို ရှောင်ပြီး အေးရှန်းဂျပန်ကို ရွေးခဲ့တာ တိုက်ဆိုင်မှု သက်သက်လား။ စစ်နိုင်ဖို့ထက် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အကျိုးဆက် လက်တွေ့ သိရအောင် သုတေသန ရည်ရွယ်ချက် အများကြီးပါနိုင်တယ်။ စစ်နိုင်ဖို့ဆို လူနေထူထပ်တဲ့ မြို့ကြီးတွေကို ချစရာမလို၊ လူသူနဲတဲ့ကျွန်းကို ဆော်ပြယုံပဲ။ ရည်မှန်းတဲ့အတိုင်းလည်း နောက်ဆက်တွဲ သေဆုံးဒဏ်ရာရမှု၊ ကျန်းမာရေး လူမှုရေး စိတ်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်း ခံစားမှု မှတ်တမ်းတင် လေ့လာနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလိုအခွင့်ရဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ စစ်ရှုံးနိုင်ငံခြင်း ဖက်ဆစ်စနစ်ခြင်းအတူတူ ဂျာမနီကို အချမ်းသာပေးပြီး ဂျပန်ကို စတေးပစ်လိုက်တာကို ပြောတာပါ။ အဏုမြူဗုံး နောက်မှထွင်နိုင်တဲ့ ကူမြူနစ်ရုရှားကိုလည်း မလုပ်ခဲ့ဘူးဗျာ၊ ဒီလိုနဲ့ ကူမြူနစ်တရုတ်ကြီး အားကိုးရာ ရခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ သိတဲ့အတိုင်း ကိုရီးယားစစ်ပွဲ၊ အင်ဒိုချိုင်းနားစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး အမေရိကန်တွေ အထိနာခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ ဂျပန်လိုမျိုးတွက်ရင် ရုရှားနဲ့တရုတ် ယနေ့လို ဖြစ်လာစရာ မရှိပါ။ အစ္စလာမ်အစွန်းရောက်ဝါဒကတော့ထားတော့ သူကနောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေး သိပ်ထွန်းကားလာတဲ့ ခေတ်ကြမှ ခေါင်းထောင်လာတာ။ ဗုဒ္ဓတရားတော်အရတော့ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသက္ကာ သတ္တဝါတခု ကံတခု၊ ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ် ပျက်ချိန်တန်ပျက်မို့ သူ့ကံအတိုင်းသွားတယ် ယူဆရမှာပါပဲ။
ဟုတ်ကဲ့…ရေးပြီးမှ မှားမှန်းသိသွားပါတယ်…offensive ဖြစ်မှန်း…မိသားစုချင်းမို့ပါ..
အိမ်ပြင်ပမှာတော့ မသုံးနှုန်းပါဘူး..ထောက်ပြပေးတဲ့အတွက်နောင်ကို ဆင်ခြင်ပါ့မယ်ရှင့်….
မနေ့က အထက်ကစာနှစ်ကြောင်းကို လေးစားသမှုနဲ့ပြန်ပြီးသကာလ အလျင်စလို
ထွက်သွားရလို့ရော….ဦးကြီးကြောင် စာစဖတ်လိုက်ရရချင်း စိတ်ကစေ့ဆော်လိုက်
တာလေး လေးစားသမှုပေါ့သွားမှာစိုးလို့ရော..၂ရောပေါင်းပြီး မရေးလိုက်တာလေး ဒီနေ့မှကြုံတုန်း..တီး..အဲ..ရေးထည့်လိုက်တာပါ…အိပ်မက်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ပြောပြ
ပြောပြ ရတယ်မဟုတ်လားရှင်…အဲ့လိုအိပ်မက်ကတော့ ပြောရတာ အရသာကို
ဂျပန်တွေရဲ့ ခုခံစစ်ပွဲ ပြင်းထန်ပုံ အကြောင်းပြချက် ရှိပေမဲ့ လူဆိုတာ အတ္တမျိုးမို့ လူဖြူအချင်းချင်း ဂျာမနီကို ညှာခဲ့တယ်လို့ ပြောတာတွေရှိတယ်။ ဂျပန်ကို မုန်းလို့အဏုမြူဗုံး ကြဲတယ် မထင်ဘူး၊ လုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါ ကော့ကေးရှန်းဂျာမနီကို ရှောင်ပြီး အေးရှန်းဂျပန်ကို ရွေးခဲ့တာ တိုက်ဆိုင်မှု သက်သက်လား။
8 May 1945 က VE Day ဆိုတော့ ဂျပန်ကို အဏုမြူဗုံး ကြဲတဲ့6August 1945 နေ့မှာ Nazi တွေ ဥရောပမှာ လက်နက်ချပြီး သွားလို့ ဗုံးကြဲစရာ မလိုတော့ဘူး။
စစ်နိုင်ဖို့ထက် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အကျိုးဆက် လက်တွေ့ သိရအောင် သုတေသန ရည်ရွယ်ချက် အများကြီးပါနိုင်တယ်။
” ကော့ကေးရှန်းဂျာမနီကို ရှောင်ပြီး အေးရှန်းဂျပန်ကို ရွေးခဲ့တာ တိုက်ဆိုင်မှု သက်သက်လား ”
ဦးကြောင် ကို ငြင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
အချက်အလက်လေး တစ်ချို့ကို တင်ပြပါရစေ ။
နာဇီ ဂျာမဏီ က 8 May 1945 ကတည်းက
unconditional surrender လက်နက်ချသွားပြီ ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက အဏုမြူဗုံး က စမ်းတောင် မစမ်းနိုင်သေးဘူး ။
အဏုမြူဗုံး ကို ပထမဆုံး စမ်းသပ် ဖေါက်ခွဲနိုင်တာက 16 July 1945 မှဖြစ်တာ ။
အဲလို စမ်းသပ် ဖေါက်ခွဲပြီးမှ6August 1945 မှာ ဟီရိုရှီးမားမှ ချလိုက်တာ ။
အမေရိကန်တွေ သူတို့ရဲ့ ရကာစ ဗုံးအသစ်လေးရဲ့ အစွမ်းကို ၊
သိချင် ကြွားချင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အိုကီနာဝါ နှင့် ဆိုင်ပန် ကျွန်းသိမ်း တိုက်ပွဲတွေမှာ ၊
ဂျပန်တွေက စစ်သား မပြောနှင့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးကအစ ၊
လက်နက်ချ အဖမ်းတော့မခံပဲ ၊ အမျိုးသမီးတွေ ကလေးကိုပါဖက်ပြီး ၊
ချောက်ကမ်းပါးကနေ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ခုန်ချ သတ်သေကြတာဗျ ။
( အမေရိကန်စစ်တပ်က ရိုက်ထားတဲ့ တကယ့် အဖြစ်မှန်
စစ်သမိုင်း Documentary တွေမှာပါ ၊ အဘ ကြည့်ဖူးပါတယ် )
ဂျပန်ကျွန်းမကြီးကိုသာ ဝင်သိမ်းရရင် ၊
ဘယ်လောက် ထပ်သေဦးမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့ ။
The war in Europe ended with the capture of Berlin by Soviet and Polish troops and
the subsequent German unconditional surrender on 8 May 1945.
The first nuclear weapon was detonated asatest
by the United States at the Trinity site on July 16, 1945.
American airmen dropped Little Boy
on the city of Hiroshima on6August 1945.
သမီးလေးနှင်းနှင်းနဲ့ ဦးကြောင်ကြီးတို့က မကြာခင် အရင်းနှီးဆုံး မိသားစုဝင်တွေ ဖြစ်တော့မှာမို့ ကိစ္စရှိပါဘူးကွယ် ပြောနိုင်ဆိုနိုင် ပွင့်လင်းနိုင်ပါတယ်၊ မကျေနပ်ရင် သမီးလေးနှင်းရဲ့ လက်သီးဆုပ်နုနုလေးနဲ့ ဦးကြောင်ရင်ဘတ်ကြီးကို တဘုံးဘုံး လာထုပစ်အုံး ရသေးတယ်။ အမေ့ကိုလည်း ပြောလိုက်နော် ဦးကြောင်လာတောင်းတော့မယ်လို့…. နှင်းလေးရဲ့ မဟူရာနက်ပြောင် ဦးဦးကြောင် :harr:
ဦးဖောနဲ့ကိုလံဘတ် ဆွေးနွေးသလို နာဇီဂျာမနီ လက်နက်ချပြီး တလခွဲအကြာ ၁၉၄၅ ဇူလိုင်၁၆မှာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အနုမြူဗုံးကို အမေရိကန်က စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး ရက်၂၀လောက်အတွင်းမှာ ဂျပန်ကို ဗုံးနှစ်လုံး ကြဲချခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍သာ အနုမြူဗုံးကို ဥရောပတိုက်သား ဂျာမန်တွေ လက်နက်မချခင် စောတီထွင်နိုင်ခဲ့ရင် အရှေ့တိုင်းသား ဂျပန်ကိုဆော်သလို ဆော်မှာပဲလား၊ စဉ်းစားစရာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်း စစ်အေးတိုက်ပွဲ အဓိကရန်သူ ရုရှားသည် လေးနှစ်နောက်ကြပြီး ၁၉၄၉ခုနှစ်မှာ အဏုမြူဗုံး အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ အကြောင်းပြချက်မှာတော့ ဒင်းတို့ အဏုမြူဗုံးကို ဒီလောက်စောစော အောင်မြင်မယ် မသိလိုက်လို့ပေါ့ဗျာ၊ ပြီးတော့ ပြောကြတယ် အမေရိကန်တွေရဲ့ မက်ဟန်တန် အဏုမြူဗုံး စီမံကိန်းကနေ ဖော်မြူလာတွေ ခိုးသွားတာ မသိလိုက်လို့ ဘာညာပေါ့။ ဒါကို ဖြစ်နိုင်ချေ အများကြီး ရှိတယ်လို့ လက်ခံပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က အမေရိကန် လုံခြုံရေးစနစ် အားနည်းခဲ့တာကိုး။ ဒါပေမဲ့ လေးနှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်သည် နည်းနည်းနောနောလား၊ ယနေ့ခေတ်အချိန် အီရန်ညူကလီးယား အရေးလို အနောက်ကမ္ဘာအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာမျက်နှာ သိပ်ထောက်နေစရာ မရှိဘူး၊ လုပ်ချင်ရင် စွတ်လုပ်လိုက်ယုံပဲ။ ရုရှားကို လွှတ်ပေးလိုက်လို့ တရုတ်ကြီး ဗုံးလုပ်နိုင်သွားတယ် (သူလည်း အမေရိကန်နည်းပညာ ခိုးသွားတယ်၊ အမေရိကန်-တရုတ် သိပ္ပံပညာရှင် ဘက်ပြောင်းသွားလို့ အောင်မြင်သွားတယ်ပြောတယ်)။ ရုရှားကို ဘာကြောင့်မလုပ်ခဲ့သလဲ၊ အဖြူမိုလို့ပဲလား။ ဒါတွေက အခုမှ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြောတာမို့ အဲဒီအချိန် ပကတိ အခြေအနေများနဲ့ ကွာဟနိုင်ပါတယ်။ တိမ်တောင်သဖွယ် မင်းရေးကြွယ် သူတို့ အတွင်းစည်း ပြသနာတွေကို မသိနိုင်ဘူးလေ။
ဂျပန်တွေ တယူသန် မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းတာကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ ဟီရိုရှီးမားနဲ့ နာဂါစာဂီမြို့တွေကို ဗုံးကြဲပြစရာ မလိုပါဘူး။ ကျွန်းတခုခုကို ကြဲပြယုံပါပဲ။ နောက်တခုက မြို့နှစ်မြို့ကို ရက်ပိုင်းဆက်တိုက် ကြဲပြတာ၊ အဲသလောက် အချိန်နည်းနေလို့လား၊ ဂျပန်စစ်ရှုံးနေပါပြီ။ ရုရှားလက်မဦးအောင် အနောက်ဖက် မဟာမိတ်တပ်ထံကိုပဲ လက်နက်ချအောင် တွန်းတဲ့သဘောလည်း ပါနိုင်တယ်။ ဒါတောင် ရုရှားက စစ်ပြီးကာနီး ဗုံးမကြဲခင် ဂျပန်kurilကျွန်းတွေကို ဝင်သိမ်းလိုက်တာ ယနေ့ထိပဲ မဟုတ်လား။
state department မှာ တာဝန်ယူကြသူမြန်မာများရဲ့ဆိုစကားအရ၊ မြန်မာနိုင်ငံကိုမပြောင်းရွှေ့ခင်၊ ဗုဒ္ဓအယူနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ လက်လှမ်းမှီသလောက်ပေးဖတ်ကြဘို့တောင်းတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်။ မြန်မာ သံရု့းမိသားစုနဲ့လည်းမိသားစုလိုဖက်လှည်းတကင်းနေခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓအယူဝါးကိုနက်နက်နဲနဲဆွေးနွေးတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူကတော့ atheist များဖြစ်လေမလား။ နားလည်လေ့လာမိသလောက် ဗုဒ္ဓရဲ့အကျင့်အကြံကိုလိုက်နာဘို့ကြိုးစားနေသူလို့ဆိုရင်ပိုမှန်မလားဘဲ။
သံအမတ်ကြီး ဆရာရှာနေရင် ဓမ္မကထိက ဘတ်ဒံတဦးကြောင်ကြီးဆီ ပို့လိုက်ပါ ဆရာဦးမိုးညိုခင်ဗျား…။ တော်ကြာနေ တရုတ်သဗုံ အဓမ္မဝါဒိ ကူမြူနစ်ပျက် ကြေးမုံဂျီး ဦးသွားမှာစိုးလို့ပါ…။ ဒါနဲ့ သံအမတ်ကြီးကတော်မှာ ညီမရှိတယ်ပြောတယ်… ဓါ့ပုံရှိရင် လုပ်ပါအုံး..။ တရုတ်သဗုံကို ထိုင်ဝမ်ရဲမေနဲ့ ဆော်ပစ်မကွ…။ :harr: